ကိုယ်​​တွေ့မို့ မျှ​ဝေပါရ​စေ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၄ လ​လောက်​ထဲက လမ်း​တောင်​မ​လျှောက်​နိုင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ ဒူးကျီး​ပေါင်းတက်​တာ သက်သာစေနည်း
Online Health Knowledge
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိတ်တွေ ပျောက်ချင်လား ?
သံပုရာသီးမသုံးပဲ အုန်းမုတ်ခွက်ပဲသွေးလူးပါကသုံးခါလောက်လူးပြီး မျက်နာပြင်ချောမွေ့လာမည်ကိုလက်တွေ့သိရပါလိမ့်မည် ။ ။
အခုပြောပြမယ့်ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက်လေးအကြောင်းပါ ။
ဖတ်ဘူးသမျှနဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးဖက်ဝင် တဲ့အုန်းမှုတ်ခွက်အကြောင်းလေးပါ ။
အညာဒေသရဲ့ရွာတွင်းရွာပြင် ပြယုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချစ့်စရာ့ဓလေ့တွေ ဟာ…ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ ။
ရေချမ်းစင်မှာ သောက်ရေခွက်အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြု ကြတာကတော့ အုန်းမှုတ်ခွက် ပါ ။
အိုးမှုတ်ခွက် ကို အသေချာ အချော ကိုင် ၊ ခွက်နားစွန်း တဖက်တချက် မှာ အပေါက်ပြီး လက်ကိုင်ရိုးကို တတ်ထားပါ တယ် ။
အခွံမပါ၊အမွှေးမပါ ခွဲထားပြီး၊အသား၊အဆန်ထုတ်ထားပြီး၊လွှင့်ပစ်ထားသောအုန်းမှုတ်ခွက် အခွံကိုဆိုလိုပါသည်။
အုန်းမှုတ်ခွက်တစ်ခုကိုရေဆေး နေလှမ်းပြီး ပါက မီးရှို့ပါ။
ထွက်လာသောအငွေ့ကို သန့်သော ဒန်၊သတ္ထု အဖုံးတစ်ခုခုဖြင့်မှိုင်းခံပါ။( တစ်ချို့ကတော့ဓါးမကြီးတစ်ချောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးလုပ်ပါတယ် မြန်မာနည်းပေါ့ )
အပေါ်ယံအရေပြား ပွန်းသွားပါက၊အုန်းမှုတ်ခွက် အဆီကို ခြစ်ယူပြီးသုတ်ပေးပါ။
ကိုယ်​​တွေ့မို့ မျှ​ဝေပါရ​စေ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၄ လ​လောက်​ထဲကလမ်း​တောင်​မ​လျှောက်​နိူင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ ဒူးကျီး​ပေါင်းတက်​တာ အထူးကုနဲ့ပြ​/​ဆေးမျိုးစုံ​သောက်​/စက်​​တွေနဲ့​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​ မ​ပျောက်​လို့စိတ်​ညစ်​​နေတာသူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​နဲ့​တွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်​​တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံ​ပေမဲ့စမ်းကြည့်​လိုက်​တာ တပတ်​အတွင်းလုံးဝနီးပါး​ပျောက်​သ​လောက်​ဖြစ်​သွားလို့ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေပါတယ်​ မူရင်းတင်​သူက သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦးပါ ကိုယ်​​တွေ့မို့ စမ်းကြည့်​​စေချင်​တယ်​​ သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦး Post ​သေချာလို့ကြေငြာပါရစေ
၂၀၀၅ ကစလို့ဒူးနာခဲ့တာ၂၀၀၈မှာဒူးထဲမှာချောတဲ့လမ်းကြောင်းသိပ်မရှိတော့ဘူးလမ်းတောင်သိပ်မလျောက်ပါနဲ့လို့profက​ပြောတယ်​ ၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မတွေ့တာနှစ်​ပေါင်း၄၀ကျော်ကြာပြီဖြစ်​တဲ့သူငယ်ချင်းသင်္ချာပါမောက္ခကိုဝင်းဆွေ(အငြိမ်းစား)ပေးတဲ့ဆေးနည်း၆/၈/၁၈နေ့မှာဘဲစလိမ်းတာကနေ့၇၅%လောက်ကောင်းနေပါပြီ သူငယ်ချင်းကတော့လည်ပင်းကြီးပေါင်းဇက်လိမ်နေတဲ့အဆင့်ကို ၄၅ ရက်နဲ့ပျောက်ခဲ့တယ်လို့နုတ်ပြောလေးနဲ့မျှဝေလို့ ၃. ၄ ဦးလောက်လဲအဆင်ပြေနေကြပြီ​ ​ဝေဒနာရှိနေရင်ကောင်းစေချင်လို့ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာပါ
ဆေးနည်းကအရမ်းဈေးသက်သာပါတယ်သုံးကြည့်ပါ ရက်ရှည်အကြိမ်များများ လိမ်းဖို့တော့လိုပါတယ် ကွမ်းစားတဲ့ထုံးနဲ့အုန်းဆီကိုသမအောင်ရောစပ်ပြီးလိမ်းတဲ့နေရာထုံးဖွေးနေဖို့လဲမလိုဘူးထုံးများသွားရင်​လဲ ထုံးကအဖတ်​လိုက်​ကွာထွက်​ပါတယ်​ အုန်းဆီများသွားရင်​လဲ အဝတ်​အစား​တွေဆီ​ပေပါတယ်​ ချိန်​ဆပြီး​ရောပါအချိုးအစားအစဉ်​​ပြေသွားရင်​ ​ခြောက်​သွားပါတယ်​ ထုံးမကြီးသီး​စေ့ ၅ ​စေ့စာ​လောက်​ကို အုန်းဆီ ၆ စက်​/၇ စက်​ ​လောက်​ ထည့်​ရင်​ အ​တော်​ပါဘဲ နှစ်​ခုစပ်​ပြီးရင်​ ဖြစ်​တဲ့​နေရာကိုအတော်ကြာပွတ်ပေးဖို့​တော့လိုပါတယ်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ ထုံးမပေါက်ပါ ကိုယ်တွေ့ပါ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဆင်​​ပြေလို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်​ နောက်လူတွေထပ်​ညွန်း​ပေးပါ အားလုံးသက်​သာ​ပျောက်​ကင်းကြပါ​စေ ကိုဝင်းဆွေ ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
မူရင်းတင်​သူ.U Zaw Oo
လွယ်လွယ်ကူကူပျောက်စေသောဆေးမီးတို ငါးမျက်စိ ရောဂါ ကို အင်္ဂလိပ်လိုCron ခေါ်ပါသည်။ငါးမျက်စိ ရောဂါ(molluscum Contagiosum) သည် အရေပြား ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဖုလေးအလုံးလေး များဖြစ် ပါသည်။ညှစ်လိုက်ပါက အဖုလုံးလေး များမှ အဆံလေးများထွက်တတ်ပါသည်။
ကူးစက် မှုလွယ်ကူးပြီး။ ထိမိ၊ဖိမိက နာလှပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အနှံအပြားတွင်လည်း ပေါက်တတ် ပါသည်။
သို့သော် ငါးမျက်စိ သည် ခြေထောက် တွင် ပေါက်သည်ကများပါသည်။အချို့က အသားမာ ဟု လည်း ခေါ်သည်။
ကြွက်နို့(Wart)ခေါ်သည်။ကြွက်နို့ဟာHPI လို့ခေါ်ကြသည့် Human Papilloma Virusဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ HPI ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား(၈၀)ကျော်ကြောင့် ကြွက်နို့ ဟာ လူခန္ဓာအနှံ့ပေါက်တယ်လို့ဆိုပါသည်။
မြန်မာ တိုင်းရင်းဆေးနည်း တစ်ခုဖြင့် ကြွက်နို့၊ ငါးမျက်စိရောဂါကို အသေအချာပျောက် ကင်းပါသည်
ကွမ်းစားထုံး (ဖေါက်ထုံး) ကွမ်းသီးတစ်လုံးစာ
ဂျင်း (၁)ကျပ်သား တစ်တက်
အိမ်တွင်းလွယ်လွယ်ကူကူရရှိစေသော အမယ်(၃) မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ထိုသုံးမျိုးကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး ငါးမျက်စိ (သိုိ့)၊ကြွက်နို့ပေါ်သို့ အုံ၍ ပတ်တီး စည်း ထားရ ပါသည်။
(၁၀)မိနစ်ကြာလျှင် ငါးမျက်စိ ၊ ကြွက်နို့ သည် အသား ပေါ်သို့မသိမသာကြွ ၍…
ဗိုက်ပူ ခါးတုတ်စေတဲ့ အကျင့်ဆိုး (၅) ခု
ဝလည်းသိပ်မဝဘဲ ဘာလို့ ဗိုက်ပူခါးတုတ်ကြီးဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးဆိုပြီး ညည်းညူသံကို စာဖတ်သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း ဝပေမယ့် ဗိုက်မှာအဆီသိပ်မရှိတာလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ။
ဗိုက်ပူခါးတုတ်ဖြစ်စေတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ပြုပြင်ထားတဲ့ အသင့်စားအစားအစာတွေကို စားတာဟာ သင့်ကို ဗိုက်ပူခါးတုတ်စေပါတယ်။ အဲဒီအစားအစာတွေမှာ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ပါဝင်လို့ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။ ဒါ့ကြေင့် သဘာဝအသီးအရွက်တွေကိုသာ များများစားပေးပါ။
အစာကို ကြေကြေညက်ညက်မဝါးဘဲခပ်မြန်မြန်စားတာဟာလည်း ဗိုက်မှာအဆီစုစေပါတယ်။ အစာချေစနစ်အတွက်လည်းမကောင်းလို့ သင့်ကို ဗိုက်ပူစေပါတယ်။
၃။ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ အများကြီးသောက်ခြင်း
ဆိုဒါတွေ၊ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ အစာချေစနစ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကို ရောင်ရမ်းစေပြီး ဗိုက်ပူစေပါတယ်။ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့အချိုရည်အစား ရေနဲ့ သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည်သောက်ပါ။
၄။ အိပ်ယာမ၀င်ခင် အစာစားခြင်း
အိပ်ယာမ၀င်ခင် အနည်းဆုံး ၃ နာရီလောက်အလိုမှာ အစာစားသင့်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်တဲ့ အစားအစာကိုပဲ ရွေးချယ်…
ကိုယ်​​တွေ့မို့ မျှ​ဝေပါရ​စေ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၄ လ​လောက်...
ဆေးဆိုးစရာမလိုပဲ ဆံပင်ဖြူတွေ သဘာဝအတိုင်း ပြန်နက်စေ...
သင့်ကို ဟာခနဲဖြစ်သွားစေမဲ့ ပဲကတ္တီပါရဲ့ ကျန်းမာရေးအ...
ဇက်ကြောတက်သူတွေ ထင်ကိုမထင်ထားမိတဲ့ အတွက် ကန်စွန်းရ...